Wabiga Shabeele oo guray +SAWIRRO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Wabiga Shabeele oo guray +SAWIRRO
Kusimaha Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdulaahi Xuseen oo ay weheliyaan xildhibaano maamulka gobolka Sh/dhexe iyo maamulka degmada Jowhar ayaa maanta booqday qaar kamid ah tuulooyin ku yaal jiinka wabiga Shabelle.
Boqolaal tuulo oo ku yaal hareeraha wabiga Shabelle ayaa waxaa soo wajahday biyo la’aan kadib markii wabiga Shabelle oo ay ku tiirsanaayeen uu guray.
Biyo la’aanta ka jirta wabiga ayaa waxaa ay sababtay in qaar ka mid ah tuulooyinka wabiga uu ka dilaaco cudurka shuban biyoodka ayna dad u dhintaan.
Cali Cabdulaahi Xuseen Cali Guudlaawe kusimaha Madaxweynaha Hirshabelle ayaa la kulmay qaar kamid ah dadka ku nool tuulooyinka ku yaal hareeraha wabiga Shabelle waxana uu booqday halka ay ka helaan biyaha dadka ku nool tuulada Bayaxaw oo ku taal jiinka Bari ee wabiga Shabelle.
“Waxaan ugu baaqayaa ummada Soomaaliyeed in biyo dhaamis loo sameeyo dadka ku nool hareeraha wabiga Shabelle,maamulka Hirshabellana waxa uu ballanqaadayaa inuu kaalinta ugu horeysa ka galayo sidii kumanaanka qoys ee u baahan biyo nadiif ah ay u heli lahaayeen,”ayuu yiri Cali Guudlaawe Xuseen Madaxweyne ku xigeenka Hirshabelle,isagoo cabay biyo laga soo qoday xin oo ah god laga qoday wabiga.
Qaar ka mid ah xildhibaanada iyo maamulka gobolka Sh/dhexe ayaa sidoo kale ka hadlay biyo la’aanta soo wajahday waxana ay sheegeen inay diyaar u yihiin inay ka qeyb qaataan sidii gargaar loogu fidin lahaa dadka ay dhibaatada biyo la’aanta ay soo wajahday.
Wabiga Shabelle ayaa dhowrkii sano ee la soo dhaafay waxa uu gurayay xilliyada jiilaalka,iyadoo ay tahay markii ugu horeysay boqolaal sano oo uu wabiga guray.
Lama oga sababta keentay in biyaha wabiga Shabelle uu guro xilliyada jiilaalka iyadoo taasna ay saameyn ku yeelatay kumanaan qoys oo ku kala nool dowlad goboleedyada Hirshabelle iyo KoofurGalbeed.
Hase yeeshee waxaa jira warar sheegaya in dowlada Ethiopia ay biyo xireeno ka sameysatay wabiga Shabelle iyadoo dhammaan biyihii u soo gudbi lahaa dalka Soomaaliya xilliyada jiilaalka ay ka soo gudbi waayaan gudaha dalka Ethiopia.